Pakistana: Bilaogin’ny Fiankinandoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2018 19:23 GMT
Salama, Omer no anarako ary adalan'ny aterineto aho. Efa 8 taona aho izao no miankin-doha amin'ny aterineto ary manaiky aho fa mila fanampiana. Nanomboka tamin'ny fijerena mahazatra ireo vohikala vitsivitsy mpamoaka vaovao ny fiankinandohako, ary hatreo dia nivoatra ho 20 ora tsy diso isan'andro an'izay tsy azo sokajiana afa-tsy ho hanoanana hitady ny antsipiriany tena farany tsy misy dikany indrindra amin'ny zavamisy tato ho ato. Nohasarotin'ny firaiketako amin'ny zavatra tena mavesatra izany; ireo vohikalan'olomalaza.
Tato ho ato, resy tanteraka aho rehefa tonga saina fa nandinika ny vohikala ofisialin'i Paris Hilton. Namela takaitra tamiko izany; tanatin'ny minitra fohy fotsiny dia nihena ho isa tokana ny taha-pahaizako ary namelaka ahy ny vadiko, niezaka namoaka ahy tanatin'ny tsy fahatsiarovan-tena vokatr'io. Noho io zavatra niainako io no nahatonga ahy niala tampoka tamin'ny aterineto tanatin'ireo herinandro vitsy lasa, izay ihany koa no nahatonga anareo tsy naharay lahatsoratra avy amiko tanatin'ny fotoana fohy.
Tamin'ny alàlan'ny fanampian'ireo mpitsabo ny aterineto sy ny toeram-pitsaboana ny Fiankinandoha amin'ny Aterineto Al Gore, efa nahazo aina aho ka afaka mitondra ity vaovao farany anatin'ny tontolon'ny bilaogy Pakistaney ity ho anareo. Manantena aho fa ankasitrahanareo ny herim-po avy amiko nitondrana ity vaovao ity hovakianareo.
Manome vaovao farany lehibe momba ny lalao ‘cricket’ ao Pakistana i ATP; Manoratra momba ny fisehoan'i Musharaf tanatin'ny fandaharan'i Jon Stewart i Kokaine; miresaka momba ny fanamarihan'ny Papa sy ny fitsidihan'i Musharaf an'i Etazonia (rohy maty) i PakCast; mampiseho ny lahatsary Ludicrous Diversions momba ireo daroka baomba tao Londona i Suspect Paki; Mpakasary Pakistaney ikoizana i Saad, mipetraka ao Singapaoro ary mendrika hotopazana maso ireo zavabitany; manome ny antsipirian'ny adim-pinoana (rohy maty) i Windmill; ary farany, manolotra ireo petrakevitry ny tsikombakomba tamin'ny 9-11 ny tenako.
Ankehitriny dia hiverina anatin'ny efitro ao amin'ny toeram-pitsaboana ny Fiankinandoha amin'ny Aterineto Al Gore aho, satria mbola mahatadidy ilay vohikalan'i Paris Hilton. Anatin'io fitsaboana mampatahotra io ny famatorana ahy ambony seza iray ka ihainoako ny “single” voalohan'i Paris Hilton hatrany hatrany mandra-pivoa-dràn'ny sofiko sy mandra-pandroaka ireo demony hiala ny atidohako ka hahatonga ahy ho voaaro amin'ny fielezany manerana ny media rehetra. Ry vahoaka, mivavà ho ahy!